Salama ary tongasoa eto amin'ny BetterTradingSystems.com
Izaho dia efa mpandahatra fandaharana fomba RAD taloha amin'ny sekoly mampiasa ny fiteny C, VB ary VBA hatramin'ny nanombohako ny asako tamin'ny 1995. Nandritra io fotoana io dia niasa tamin'ny naha-mpifanaraka sy mpitantana freelancer ahy tamin'ny ankamaroan'ny sehatry ny tsena rehetra toa an-dry Pharma, Banking & Finance, Fiantohana, solika sy gazy, lalàna, fivarotana, HR & karama, fikarohana sy demografika ary governemanta.
Hatramin'ny 2012, niasa ho toy ny freelancer fananganana rafitra varotra mandeha ho azy (EA's) ho an'ny sehatra varotra Metatrader 4 (sehatra varotra be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao).
Amin'ity fotoana ity dia efa nanao kaody sy nosedra ny rafitra varotra rehetra fantatra aho ary nanjary nahatakatra izay mahatonga ny rafitra varotra mahasoa sy izay tsy. Nahazo fomba fijery sarobidy maro koa aho amin'ny tontolon'ny varotra izay noheveriko fa tokony hozaraina. Ka inona no fomba tsara kokoa anaovana azy io noho ny amin'ny endrika 'The Best World Automated Trading System EA'.
Ankehitriny, amin'ny maha programmer ahy, dia tiako ny manao fanamby tsara (na tsy azo atao). Ka natomboko ity iraka ity tamin'ny fananganana lisitra faniriana lava 'Must-Haves' sy 'Nice-To-Haves'. Ny ankamaroan'ny zavatra ato amin'ity lisitra ity dia avy amin'ny mpanjifa teo aloha izay misy mpivarotra andrim-panjakana, mpivarotra antsinjarany matihanina, mpivarotra antsasak'adiny ary ny hevitro manokana momba izay ilain'ny rafitra varotra tonga lafatra tafiditra ao. Raha fintinina, lisitra misy ny mampiavaka ny rafitry ny varotra nofinofisiko. Ity ny lisitra:
• Rafitra iray izay afaka manara-maso marika sy fe-potoana maro araka izay azo atao mitady ny fametrahana ny varotrao. Anisan'izany ny forex (lehibe, zaza tsy ampy taona & exotika), metaly, angovo, entana, crypto, tahiry, indeks ary ho avy.
• Rafitra iray izay afaka mampifangaro singa avy amin'ny tondro isan-karazany sy ny fe-potoana samihafa mba hamoronana ny fametrahana varotra faratampony ahy nefa tsy manova ny kaody EA isaky ny mandeha.
• Rafitra iray izay tsy hanadino mihitsy ny fotoana varotra.
• Rafitra ahafahako misafidy ireo vanim-potoana tiako hisokatra amin'ny varotrao.
• Rafitra iray izay hanokatra ny varako indray mandeha ihany ary hamono tena raha misafidy aho.
• Rafitra iray misy fatiantoka mijanona amin'ny ATR.
• Rafitra iray misy fatiantoka fiatoana miorina amin'ny ATR izay mampiasa ny fitsipiky ny pro (izany hoe manaraka ny varotra H4 mampiasa ny tabilao M15, sns.).
• Rafitra iray mampiasa ny ATR miorina maka tombony.
• Rafitra iray afaka manidy ny varotra-ko amin'ny alàlan'ny fe-potoana mitovy nanokafana ny varotra nataoko.
• Rafitra iray afaka manidy ny varotra rehetra vitako rehefa nahatratra tombony azo aho.
• Rafitra iray izay tsy manidy ny varotra aloha loatra ary tsy voan'ny 'effets whipsaw'.
• Rafitra iray izay afaka manidy ny varotra ahy amin'ny zoma alina.
• Rafitra iray izay tsy mandany ny fananako rehetra amin'ny fanokafana varotra vaovao (mamela ahy hivoaka).
• Rafitra tsy manokatra varotra raha avo loatra ny fiparitahana.
• Rafitra izay tsy hividy mihitsy eo ambony na hivarotra amin'ny farany ambany.
• Rafitra iray izay mandaitra izay haben'ny habeny hampiasako ho ahy.
Ny valiny farany, taorian'ny nampidirany tsara an'ity lisitra ity ho EA iray, mino aho fa ny rafitra varotra lehibe indrindra hita hatrizay.
Raha vantany vao nampiasainao io dia hiova mandrakizay ny fiainam-barotra ary hanontany tena ianao hoe nanao ahoana ny varotra nataonao raha tsy teo izy!
Ity misy maniry anao hahita pips mahomby maro,
Programmer / talen'ny